Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Toy ny rivo-doza ny hetsika an-dalambe tsy nahazo alàlana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Toy ny rivo-doza ny hetsika an-dalambe tsy nahazo alàlana
Mitamberina ao an-tsaina ny fitantaran’ny namana iray momba ny tranga tena niseho. Tamin’ny efatra maraina raha teo am-panaovana ny kafe niomankomana hanoratra izy no injay henony misy mikasaotsaoka. Raha nosokafany ny varavarankely hitazanany ny anton’izany, gaga izy raha nahita zatovo roalahy mananika ny rindrina mikasa hamonjy varavarankely iray eo amin’ny rihana ambony. Tsy taitra firy anefa Ranamana ka fananarana no nataony tonga aloha. « Mba menatra ry zalahy efa mangira-potsy ny andro. Ny mpamosavy aza efa samy nody avokoa», nitsambikina nidina ary nanao tongotra an-katoka toy ny tsy teo ireo bandy roalahy.
Ao anatin’izao fotoan-tsarotra izao, efa tsy fidiny ny asan’ny jiolahy isan-karazany izay toy ny rahona manamatroka ny toetr’andro, nefa mandefa feo indray ny mpanohitra momba ny fikasany hanao fihetsiketsehana an-dalambe amin’ny sabotsy. Tsy mahazo alàlana izany izay. Ny fanaovana fihetsiketseham-bahoaka ankalamanjana moa matetika miteraka korontana eto an-toerana. Efa fantatra mialoha fa rehefa tsy nahazo alàlana dia tsy maintsy misy fifandonana miaro herisetra amin’ny mpitandro filaminana izay mahazo iraka handrava ny filaharana sy fitangoronana. Aiza dia disadisa pôlitika indray amin’izao vanim-potoana izao no atao antony hitarihana fikorontanana, nefa ny mponina izay lazaina arovana sy tiavina tsy maniry afa-tsy ny filaminana mba ahafahany mamarana ny taona sy hitsena ny taom-baovao ao anatin’ny fitoniana.
Marina fa mbola tsy ampy ny fahalalahana ahafahan’ny mponina haneho ny alahelo sy ny tsikera momba ny fitantanana toy ny any amin’ny firenena anjakan’ny demôkrasia. Tolona pôlitika no tsy maintsy hanaovana ezaka mba ahatongavana amin’izany fahalalahana feno izany. Na izany aza efa nisy ihany ny dingana vita momban’izany. Raha fohazina ny tantara, miseho mazava fa tamin’i Dada teo amin’ny fitondrana na ny fivorivorina toy ny ataon’ny Tim eo amin’ny Magro etsy Behoririka aza dia tsy nahazo vahana. Mbola averina eto indray fa na tsy famorina olona noho ny fanoherana aza fa meeting fanaovana fanambarana momba ny fikasany hilatsaka amin’ny fifidianana filoha aza dia nofingapinganina nanamparany fahefana mba tsy ahafahana manatanteraka ny fampitana an’izany any ampoto-tsofin’ny vahoaka. Tsy olona efa razana toa an’Itompokolahy Herizo Razafimahaleo no afaka fohazina hijoro vavolombelona, na izany aza mbola maro no mbola velona tadidy momba ny fitrangan’izany.